सपनाको कुरा - युगपत्र
✍️ युगपत्र संवाददाता	 📅 २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:५४ 337
१) सपनाको धेरै कुरा अलौकिकतासँग तादम्य राख्दछ । सपनाको फल र परिभाषा गर्न सिग्मन्ड फ्रायद, ज्याक्स लकान वा अन्य युरोप केन्द्रीत छापालेखवाला मनोवैज्ञानिक खोज्न नपर्ला । अन्य मानवीय संवेदना जस्तै सपनाको फल पनि मौलिक र सांस्कृतिक हुन्छन् । मानव उद्विकास र ज्ञान निर्माणसँग सपना पनि जोडिएको हुन्छ । सपना अवचेतन मनको उपज हो । यसको कुनै वैज्ञानिक र तार्किक आधार हुन्न भन्ने मानिसहरु पनि ढिलो चाँडो सपनाको फल र परिणाम के होला भनेर डराउने प्रवृति निकै पहिलेदेखि चलेकै छ । पूर्वीय धर्म, मिथक, कतिपय दर्शन र ज्ञान पनि सपनामा दिने विभिन्न चेष्टामा आधारित रहेको प्रसङ्ग निकै भेटिन्छन् ।
२) हाम्रो समाजमा सपनाकै संकेत र चेष्टाको आधारमा कतिपय सामाजिक व्यवहार र मानवीय क्रियाकलाप हुने गर्दछन् ।
३) सपनाको प्रसङ्ग जोडेर वा बनाएर आफ्नो शासन व्यवस्था बलियो बनाउने कतिपय शासक पनि छन् । यहाँ मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको चाहिँ क्रिस्टियन धर्म र सपनाको चेस्टा हो । क्रिष्टियन धर्म स्थापनाको पहिलो तीन सय वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने क्रिष्टियन धर्म मान्ने समुदाय अपहेलित, संघर्ष र टकरावको अवस्थामा थियो । ग्रिक सभ्यतामा नाटक हेरेर मनोरञ्जन लिने ठुलो समुदाय थियो । ग्रिक सभ्यता धरासायी भएपछि रोमन सभ्यता मौलाउन पुग्यो, रोमनहरु प्रकृतिपूजक र मुर्तिपूजक थिए । मानिसमा अलौकिक शक्ति हुन्छ वा येशु क्रिस्टलाई देवताको रुपमा मान्ने मानिसहरु देख्दा उनीहरु हाँस्थे र खिल्ली उडाउँथे । जनावर नचाउने, जिस्काउने, वा गिज्याउने खेल (सर्कस) रोमन सभ्यतामा निकै प्रख्यात थियो । कतिपय घटनामा क्रिस्टियन प्रचारक पादरीलाई जनावरसँग जुध्न उनीहरुको खोरमा हालेर “लौ तेरो येशुलाई बोला” उसले बचाउँछ भन्दै मनोरञ्जनको साधन बनाउँथे ।
४) रोमन सभ्यताका अनेक आरोह र अवरोहसँगै “कन्स्टान्टिन” भन्ने शासकले आफ्नो राज्य विस्तारको क्रमामा एक रात देखेको सपनाको प्रसङ्गसँग अहिलेको क्रिस्टियन धर्मको शक्ति आर्जन भएको देखिन्छ । कुरा सत्य वा असत्य जे भएपनि कन्स्टान्टिनले राति सपनामा सनातन इजिप्सियन धर्मको जीवनको चिन्ह, (जुन केहि फरक भए पनि पछि क्रस चिन्हमा परिणत गरियो) । आफ्नो घाँटीमा आएर झुण्डिएको जिकिर पेश गर्दै आफ्ना हरेक सैनिकलाई उक्त चिन्ह आफ्नो ढाल वा तरवारमा राख्न लगाए । यसरी एउटा शासकले आफ्नो शक्ति आर्जनको लागि गरिएको उक्त आग्रह सँगै क्रिस्टियन धर्म निकै शक्तिशाली भयो ।
५) करिब एक हजार वर्ष सम्म क्रिस्टियन धर्मको प्रभाव यस्तो रह्यो कि जहाँ व्यक्तिको कुनै महत्व रहेन जसलाई अहिलेका इतिहासकारहरु कालो युग भन्छन् । चौथो शताब्दीदेखि चर्च निकै शक्तिशाली संस्था बन्यो । को राजा बन्ने , कसलाई मान्यता दिने मात्र नभई सामाजिक मूल्यमान्यता, व्यक्तिगत सम्पति, बोक्सीको आरोप (विच हन्टिंग) जस्ता अनेक विसंगति फैलिए । युरोपका अनेकाँै सभ्यताहरु मासिए, फलत पश्चिमा ‘रिलिजन’ र राज्य शक्तिको बिचमा भएको टकराव मत्थर गर्न विभिन्न सन्धि सम्झौता भए । शक्तिको विग्रह गर्न गरिएको सम्झौता नै सेकुलारिज्म हो । हाम्रो मुलुक नेपालमा बुझ्नु न सुझ्नु एकाएक धर्म र राज्यको टकराब नभएको देशमा विदेशीको सूत्र लागू गरेर धर्म निरपेक्ष संविधानको रटान लगाएका छन् । यसले एक दिन विस्तारै प्राय मौलिक धर्म र संस्कार मास्ने छ ।
६) अहिलेको भ्याटिकन सिटी युरोपका दर्जनाँै सभ्यता मासेर बनेको “कन्स्टान्टिन” को अवशेष हो । पुनर्जागरणसँगै विज्ञान र रिलिजन छुट्टिएको वैचारिक उद्घोष गरेको भएता पनि औपनिवेशिक र अहिलेको नवऔपनिवेशिक संसारमा उनीहरु सँगै घाँटी जोडिएर हिडेका छन् । इतिहासमा प्रकृतिपूजक रोमन, इजिप्ट, ग्रिक सभ्यता सके जस्तै; आज पनि क्रिस्टियनहरुको पहिलो प्रहार प्रकृतिपूजक, आफ्नो लिपि नभएका, र मौखिक इतिहास भएका समुदायमाथि भएको अत्याचार सपना होइन, विपना नै हो ।
७) प्याजको झिल्ली जस्तो बेलायती, अमेरिकन र क्यानाडाका पार्टी नेताको सपनामा देखेको चिन्हको पदचाप खोतल्ने हो भने कन्सेर्भेटीक, लेबर, डेमोक्रेटिक, लिबरल वा अन्य, त्यहाँ १६ औँ शताब्दीका व्हिग र टोरी भेटिन्छन्, त्यस्तै क्याथोलिक र प्रोटेसटेण्ट भेटिन्छन्, त्यो भन्दा गहिरो केलाउँदै जाने हो भने कन्स्टान्टिन र डेसिअस, रोमन, ग्रिक र इजिप्ट, प्लेटो भेटिएला, अपोलो र डाइनोसिस वा इसिस र ओसिरिस भेटिन्छ । यिनीहरुको सपनामा क्रमिकता छ है !
८) शीतयुद्धका उपउत्पादनको रुपमा विकशित ‘कपू’ (कम्युनिस्ट र पूँजीवादी, वा अन्य आयातित घामेल) नेताको सपनाको चिन्ह र पदचाप पछ्याउने हो भने कार्ल माक्र्स, बोल्सेभिक क्रान्ति, भ्याटिकन सिटी, जुत्से विचारधारा, माओ, समर स्कुल ओफ लिङ्गुइस्टिक, लन्डन स्कुल ओफ इकोनोमिक्स, राम मोहन लोहिया, ज्योति बसु, महात्मा गान्धी, लेनिन, गोर्बचोक, गोन्जालो, अक्टोबर क्रान्ति, गोयबल्स, लग्जेम्वर्ग, क्युवा , चे ग्वेभारा, ट्रट्स्कि, सी जिन्पिंग, भेनेजुएला, कम्बोडिया, ठोरिका राम, पशुपतिको जलारी, नाकाबन्धी, आदि इत्यादी , के के हो ? पुरै भुलभुलैया (हराउने घर) भेटिन्छ होला । उनीहरुको दिमागमा नेपाल, आफ्नो स्वधर्म, कुल, राष्ट्रियता, परम्परा, पृथ्वीनारायण, महेन्द्र, किरात, गोपाल, महिसपाल, सनातन हिन्दु, बौद्ध , किरात, जैन, प्रकृतिपूजकको चिन्ह मरे भेटिन्न । किनकि हाम्रो देशका शासक, नेता र प्रशासकको चेतन, अवचेतन र अर्धचेतन दिमाग नै विदेशीको दर्शन, सिद्धान्त, विचार, धर्म लगायतका फोटोकपीले भरिएको छ, उनीहरुको जरो किलो नेपालमा छैन । त्यस्तो हुदैनथ्यो भने आज ७० लाख युवा जनशक्ति पसिना पुछ्दै नेतालाई सराप्नुको सट्टा आफ्नो सपनालाई विपना बनाउँदै रमेका हुन्थे, जय स्वाभिमान भन्दै ! जय शम्भो ।
आफ्नो कर्तब्य बोध गरी मातृ ऋण तिर्ने बाटो रोजौँ